“Muddo dheer ayaan sugayay daqiiqaddan” – Lionel Messi – Gool FM
(Argantina) 10 Sebt 2021. Dareenka xiddiga xulka qaranka Argentine ee Lionel Messi ayaa isbadelay, wuxuuna isku dhex daray farxad iyo oohin, kaddib kulankii xalay ay la ciyaareen xulka Bolivia, kaasoo ka tirsanaa isreebreebka Koobka Adduunka ee Qatar 2022.
Messi ayaa u dhaliyay seddexda gool dalkiisa, wuxuuna kala qeyb galay saaxiibbadiis xaflad yar oo ka dhacday garoonka El Monumental, taasoo ay kula dabaal degayeen ku guuleysigooda Copa America, taageerayaashii ku sugnaa tarbuunka garoonka.
Leo ayaa ruxay koobkii, sidoo kale wuxuu farxad ku muujay saaxiibbadiis dhexdooda, laakiin wuu ooyay markii uu la hadlayay TV -ga kulanka kaddib, isaga oo yiri:
“Waan welwelsanaa, waxaana lahaa rabitaan weyn oo aan ku raaxeysto, waxaan sugayay daqiiqaddan waqti dheer.”
“Waxaan ku guuleysanay ciyaar muhiim ah, waana dabaaldegnay, waxaan raadinayay daqiiqadahaan ilaa waqti dheer.”
“Fursadan ayaa ii timid, waxay ahayd daqiiqad gaar ah, sababtoo ah duruufaha lagu sameeyay, iyo maqnaansho dheer kaddib, waa dabaaldeg cajiib ah.”
“Qoyskeyga dhibaato badan ayaa soo gaartay, haddana waxay ku sugan yihiin masraxa damaashaadka, aad ayaan u faraxsanahay.”
Carragher oo niyad jabiyay taageerayaasha Man United kaddib markii uu soo laabtay Ronaldo